सुख र सम्वृद्धि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हरेक दिन हरेक बार अपनाउनुस् यी उपाय ! – Butwal Sandesh
सुख र सम्वृद्धि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हरेक दिन हरेक बार अपनाउनुस् यी उपाय !
हरेक दिन रहने हरेक बार कुनै न कुनै ग्रहसंग जोडिएको हुन्छ। हरेक बार असर रहने ग्रहको असर सामान्य बनाउनको लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। सप्ताहको सातै दिन ग्रहको शुभ असर प्राप्त गर्नको लागि ज्योतिष शास्त्रमा केहि उपायहरु उल्लेख गरिएका हुन्छन्। कुन बार कुन ग्रहको असर हुन्छ भन्ने समेत ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। कुनबार के उपाय प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यस लेखमा बताउने छौँ।
सोमवार: ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सोमबारलाई चन्द्रसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यदि कोहि व्यक्तिको कुण्डलीमा चन्द्रमा खराब स्थिति रहेका त्यस व्यक्ति प्राय जस्ती बिमार पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस प्रकारका मानिसहरुले सोमबारको दिन शिवलिंगमा जलाभिषेक गर्नु पर्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै दुधले अभिषेक गरेमा अझै राम्रो हुने मानिन्छ। महामृ*त्युंजय मंत्रको पाठ गर्नु भएमा पनि उचित रहन सक्ला।
बिहिबार: बिहीबारको दिनलाई बृहस्पति ग्रहसँगजोडेर हेर्ने गरिन्छ। अशुभ बृहस्पतिका असरका कारण धेरै कोशिस गर्दा पनि कहिले पनि सफलता नमिल्ने हुन्छ भने अकालमा मृ*त्यु समेत हुने गर्छ। बृहस्पतिको असर काम गर्नको लागि बृहस्पतिलाई पहेंलो वस्तुहरू, पहेंलो फलहरू, पहेंलो कपडाहरू अर्पित गर्नु पर्ने हुन्छ।